ကြက်သားကင်နည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြက်သားကင် ( ၅) ယောက်စာ
နံနံပင်ပင်စည်+ အမြစ်..............................၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
နနွင်းမှုန်. ................................................၁ ဇွန်း(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း)
အ၀ါရောင်ပာင်းချက်မဆလာ..........................၁ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ကြက်သားတွေကို ၁လက်မ အရွယ်လောက်လေးတွေတုံးထားပါ။
နံနံပင်အမြစ်+ ပင်စည်တွေကိုပါးပါးလှီးပြီး၊ ငရုတ်ကောင်းစေ့ဖြူ ၊ နံနံစေ့၊
ဇလုံခပ်ကြီးကြီးထဲမှာ..ကြက်သားတွေကိုထည့်ပြီး လိမ္မော်သီး(သို.) ကမ္ဗလာသီးကို ထက်ဝက်ခြမ်းပြီးအရည်တွညှစ်ချပါ။
ထို.နောက်၊ သကြား၊ ငါးငံပြာရည်၊ ခရုဆီ၊ နနွင်းမှုန်.၊ အဝေါရောင်ပာင်းခတ်
၁ နာရီခွဲ မှ ၂ နာရီခန်.နှပ်ထားပြီးပြီဆို ၀ါးတုတ်ချွန်လေးမှာ..၄ ခု(သို.) ၅
ခုစီထိုးသီပြီး..မီးသွေးဖို ( သို.) Griller မှာကျက်အောင်ကင်ပေးပါ။
Posted in: ကင်နည်း